Xinhua Myanmar - ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမည်ဟုပြောကြား
နီပေါနိုင်ငံသားက ဧဝရက်တောင်ထိပ်အား ၂၅ ကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် မိမိ၏စံချိန်အား ထပ်မံချိုးနိုင်ခဲ့
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမည်ဟုပြောကြား
ကုလသမဂ္ဂ ကာကွယ်ဆေး COVID-19
နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က ပြုလုပ်သော COVID-19 ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အား တွေ့ရစဉ်(Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua) ) International Organizations
ကုလသမဂ္ဂ၊ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က ၎င်းအတွက် ကာကွယ်ဆေးရရှိလာမည့်ချိန်တွင် အများပြည်သူရှေ့မှောက်၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို ခံယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအကြား ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသည်ကို ပြသရန် နှင့် ၎င်းကိုယ်တိုင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းအား ပြန်လည်းဖြေကြားရာတွင် ဂူတာရက်စ် “ ကျွန်တော်လား၊ ထိုးမှာပေါ့ ၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာ ကျွန်တော့်အတွက် ကာကွယ်ဆေးရလာမယ့်အချိန်ကြရင် ဆေးထိုးနှံမှုကို ခံယူသွားပါ့မယ် ၊ အဲဒီဆေးထိုးနှံမှုကို အများပြည်သူရှေ့မှောက် ထင်သာမြင်သာဖြစ်ဖို့လည်း ကျွန်တော့်အတွက်လုံးဝသံသယမရှိပါဘူး ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဂူတာရက်စ်က လူတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကာကွယ်ဆေးရလာမယ့်အချိန်ကြရင် လူတိုင်းလူတိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်း အားပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမက ကျွန်တော်တို့အတွက် အကျိုးဆောင်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးကြမယ်ဆိုရင် လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးကို အကျိုးဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ပိုးဖြန့်သူမရှိတော့ဘူးလေ ၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်ပျံ့နှံမယ့်အန္တရာယ်လည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့ ” ဟု ကုလသမဂ္ဂ-အာဖရိကသမဂ္ဂ နှစ်ပတ်လည် ကွန်ဖရင့် အစီးအဝေးအပြီး သတင်းထောက်များအား ပြောကြားရာတွင် ဂူတာရက်စ်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဟာ အားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဂူတာရက်စ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အများပြည်သူကုန်စည်တစ်ခုအဖြစ် လူသားတိုင်း ၊ နေရာတိုင်း ၊ အထူးသဖြင့် အာဖရိကတိုက်တွင်လည်း ရရှိနိုင်စေရန် တောင်းဆိုမှု ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဂူတာရက်စ်က ကြွေးမြီပယ်ဖျက်ခြင်းအပါအဝင် အာဖရိကနိုင်ငံများအတွက် ကြွေးနွံမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရေးအားထုတ်မှုအပေါ် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ၊ အာဖရိကနိုင်ငံများအတွက် လိုအပ်သော ကြွေးမြီဆပ်နိုင်ရေး ဈေးကွက်အတွင်း လျင်မြန်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ရန် နှင့် ဘဏ္ဍာရေးပြန်လည်နလံထူရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားကြရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖရိကနိုင်ငံအများစုသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှု နှင့် ဝယ်လိုအား ကျဆင်းမှုတို့ကြောင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါအကြပ်အတည်းအား အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် ငွေးကြေးပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
UN chief says he will take COVID-19 vaccine
UNITED NATIONS, Dec.9(Xinhua) -- UN Secretary-General Antonio Guterres said Wednesday that he will takeaCOVID-19 vaccine publicly when suchavaccine becomes available to him.
Asked whether he will takeavaccine and whether he will do it publicly given wariness among people toward vaccination, Guterres said: "I, of course, intend to receive the vaccine when it becomes available for me in whatever situation that will be justified for that. And obviously, I would have no doubt in doing it publicly."
He encouraged everybody to be vaccinated.
"I encourage everybody, as access to the vaccine (becomes available), to be vaccinated, because it isaservice not only that we provide to ourselves. Each one of us being vaccinated providesaservice to the whole community because we are no longer spreading, there is no risk of spreading the disease," he told reporters after an annual United Nations-African Union conference.
"So vaccination is for meamoral obligation in relation to all of us."
Guterres reiterated his call foraCOVID-19 vaccine to beaglobal public good available to everyone, everywhere, and particularly, available in Africa.
He also repeated his appeal forabold and coordinated international approach on debt relief efforts for African countries, including debt cancelation, where appropriate, as well as the meaningful increase in the financial support to African countries to provide the necessary liquidity and to finance the recovery.
Most African countries lack the financing to adequately respond to the COVID-19 crisis, due in part to declining demand and prices of their commodity exports, he said.
Photos caption - UN Secretary-General Antonio Guterres speaks ataUN General Assembly special session in response to the COVID-19 pandemic at the UN headquarters in New York, on Dec. 3, 2020. (Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua)
Previous Article ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အာဖရိကအလယ်ပိုင်းဒေသရှိ နိုင်ငံများအတွက် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီကြရန် တိုက်တွန်း
Next Article ပိုးလမ်းမလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း တို့က “လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ကို ကို အတူတကွ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်” ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်